फेरी खस्कियो सेयर बजार,यस्तो छ वास्तविकता ? कसरी हुन्छ सुधार ?हेर्नुहोस भिडियो सहित::Nepal's Online News Portal
फेरी खस्कियो सेयर बजार,यस्तो छ वास्तविकता ? कसरी हुन्छ सुधार ?हेर्नुहोस भिडियो सहित
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएदेखि नै शेयरबजारमा निकै उतारचढाव आएको छ ।पछिल्ला दिनमा सेयर बजार परिसूचक नेप्सेसहित अधिकांश समूहगत सूचकहरू राताम्मे भएका छन् । वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएदेखि नै त्रसित लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सरकार गठनपछि पनि झनै खस्किएको छ । शेयर बजारमा भिषण पहिरो गइरहेका बेला सबैको आशाको दियो मानिएका पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएसँगै लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका थिए तर लगानीकर्ताले सोचे अनुरुपको शेयर बजार भने बढ्न सकेन् ।
धेरैले आशाको नजरले हेरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको सेयरमा लगानीलाई अनुत्पादक भन्ने अभिव्यक्तिपछि बजारमा निरन्तर पहिरो नै गइरहेको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यसलाई आफूले नभनेको भन्दै सच्याउने प्रयास त गरेका छन् तर विगतदेखि नै उनको सेयर बजारसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई नजिकबाट नियाल्ने जो–कोहीले पनि उनलाई बजारमैत्री अर्थशास्त्रीका रूपमा भने स्विकार गर्दैनन् ।
स्थिर सरकार आएपछि शेयर बजार बृद्धि हुने आशा धेरै लगानीकर्ताहरुले राखेका छन् । र सरकारले पनि लगानीकर्तालाई नआत्तिन अनुरोध गर्दै आएको भएपनि सरकाराई शेयर बजारले नटेरेको आभाष भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालो धनलाई सेतो बनाउने अभिब्यक्ति दिनु त कहिले अर्थमन्त्रीले सेयरमा लगानीलाई अनुत्पादक भन्ने गरेको अभिब्यक्तिले शेयर लगानीकर्ताहरु भने अत्तालिएका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाको यही पछिल्लो अभिव्यक्तिको शिकार बनेको छ शेयर बजार ।
अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिइसक्दा पनि शेयर बजार सम्हालिन सकेको छैन् । यसको कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ताको वाम सरकारप्रतिको अविश्वास नै हो । सिद्धान्ततः खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने तर व्यवहारमा भने अर्थतन्त्रका सबै अवयवलाई नियन्त्रणमै राख्ने सरकारी चाहना पनि छिपेको छैन । हामीले जति पुँजी परिचालन गरे पनि उक्त पुँजी पुनः घरजग्गा, सेयर मार्केट, अटोमोबाइल र उपभोक्तामा लगानी ग¥यौं भने त्यसको केही पनि अर्थ रहँदैन भन्ने एक अन्तर्वार्तामा खतिवडाको अभिव्यक्तिले नै सेयर बजार प्रभावित भएको देखिन्छ ।
सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्षम ठानिएका अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भएका शब्दभन्दा भावलाई केलाउने हो भने यसमा पनि उनी सेयर बजारप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् । सेयर बजारमा हुने लगानी साँच्चै उत्पादक हो कि अनुत्पादक हो भन्ने प्रश्न यतिबेला स्वभाविक बहसको विषय बनेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थमन्त्री भएकै दिन १४ गते सोमबार सेयर बजार १५ दशमलव ७८ अंकले घटेर १ हजार ३ सय ५८ दशमलव ५८ अंकमा कायम भएको थियो भने १५ गते मंगलबारको परिसूचक ५ दशमलव ८६ अंकले उकालो लागेर एकहजार ३ सय ६४ दशमवल ८१ अंकमा पुगेको थियो । खतिवडा अर्थमन्त्री भएको भोलिपल्ट एक्कासी सेयर बजारमा आएको परिवर्तनले लगानी कर्ताहरुमा खुसीसाली छाएपनि त्यो खुसी भने लामो समय टिक्न सकेन् । र १६ गते बुधबार पुनः शेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आयो । सो दिन १८ दशमलव ८२ अंकले घटेर एकहजार ३ सय ४५ दशमलव ९९ अंकमा ओर्लिन पुग्यो ।
यस्तै, २० गते आइतबार शेयर बजार एक वर्षयताकै कमजोर विन्दुमा पुग्यो । त्यसदिन नेप्से सूचक ४१ दशमलव ५६ अंक अर्थात ३ दशमलव शुन्य ९ प्रतिशतले घटेर एकहजार ३ सय ४ दशमलव४३ अंकमा झ¥यो । जसका कारण लगानीकर्ताहरु थप निराश बने । यस्तै, २१ गते सोमाबार पनि सेयर बजारमा १६ दशमलब ६९ अंकले गिरावट आयो भने २२ गते मंगलबार र २३ गते बुधबार क्रमशः ८ दशमलव ७ अंक र १८ दशमलव ६९ अंकले बजार बढ्न पुगेको छ । जस्ले गर्दा लगानीकर्तालाई केही आशाको संकेत मात्रै देखाको छ ।
किन यस्तो भयो ? कसरी सुधारिन सक्छ ?
धेरैले आशाको नजरले हेरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको सेयरमा लगानीलाई अनुत्पादक भन्ने अभिव्यक्तिपछि बजारमा निरन्तर पहिरो नै गइरहेको छ । उनले आफ्नो अभिब्यक्ति शेयर बजारलक्षित नरहेको भन्दै लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पारिरहेपनि लगानीकर्ताहरुले भने उनको अभिब्यक्ति बिर्सिएका छैनन् ।
वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएदेखि नै अस्थिर रहेको सेयर बजार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पछिल्लो अभिव्यक्तिको शिकार बनेको छ । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा हुने लगानीलाई ‘अनुत्पादक’ भनेका कारण उनि अर्थमन्त्री भएयता भएका ७ कारोबारमध्ये ५ कारोबारमा लगानीकर्ताहरुले निराशा ब्यहोर्नुप¥यो ।
मुलुकमा तीनै तहको निर्बाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारको आगमन समेत भइसकेको छ । लगनाीकर्ताहरुले नयाँ सरकार आएसँगै शेयर बजारमा परिवर्तन आउने आशा राखे पनि त्यसो भने सकेन् । नयाँ सरकारसँगै शेयर बजार पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
झट्ट हेर्दा कुनै पनि लगानीबाट देखिने उत्पादन नआउँदा यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने देखिए पनि सेयर बजारमा हुने लगानी साध्य नभई उत्पादनको साधन मात्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । पुँजी सिर्जनाका लागि वैध माध्यम भएको र यसकै माध्यमबाट सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगले थप लगानी विस्तार गर्ने भएकाले पुँजीबजारलाई अनुत्पादक भन्नै सकिँदैन । अनुत्पादक त त्यतिबेला मात्र भन्न सकिन्छ, यसमा हुने लगानीले मुलुकको ठूलो पुँजी कतै ‘डम्प’ भएर बसेको हुन्छ । तर, सेयर बजारमा हुने कारोबारको वृद्धिसँगै बजार पुँजीकरण बढ्ने र सिर्जना हुने पुँजीले अन्ततः उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने भएकाले यो लगानी निश्चय नै अनुत्पादक होइन । कुनै पनि कम्पनीलाई आवश्यक थप पुँजी परिचालन गर्न पनि हालैका दिनमा धेरै प्रचलनमा रहेको फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) लगायतका उपकरणहरूले समेत पुँजीबजारसहित उत्पादनमूलक उद्योगसमेतमा बहार सिर्जना गरेको देखिन्छ भने यस्तो वित्तीय सौन्दर्य भएको क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्नु उचित मान्न नसकिने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
निश्चय पनि सेयर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाएर वा थोरै सूचनाका आधारमा धेरै हल्ला प्रवाह गरेर फाइदा लिने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छन् । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि भने नियामक निकाय सधै चनाखो बन्नु आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणसहित यसको नाफाको हिस्सेदार बनाइनुपर्नेमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तर्क छ । तर, बजार नियमनको नाउँमा सम्पूर्ण व्यवस्थालाई नै नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न खोज्यो भने त्यो लगानीकर्ताको हितमा हुन सक्दैन् ।